महिना दिनमै पायल्स रोगबाट छुटकारा पाउन खानुहोस् मुला ! – Khabaarpati
March 12, 2021 goodmamLeaveaComment on महिना दिनमै पायल्स रोगबाट छुटकारा पाउन खानुहोस् मुला !
एजेन्सी । पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा मलद्वारमा पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो समस्या यस विषयमा डाक्टरलाई बताउनु हो ।हामी मुला काचै या पकाएर खाने गर्दछौँ । के तपाईलाई थाहा छ ? पाइल्स रोकथामका लागि मुला सबैभन्दा अचुक ओखती साबित भएको छ । मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या केही महिनामै समाधान हुन्छ । मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या छ भने त्यो समस्या बढ्न पाँउदैन ।
औषधिका साथसाथ घरेलु उपायबाट पनि केही दिनमा तपाई यो समस्याबाट मुक्ति पाउनु हुन्छ । मुलामा डाइट्री फाइबर्स पाइने गर्दछ । यसले स्टुललाई मुलायम गर्न सहयोग गर्दछ । यसबाट पाचन प्रक्रियापनि राम्रो हुन्छ । मुलामा कयौँ यस्ता तत्व पाइन्छ, जुन पाइल्सका भएपछि हुने पीडा कम गर्न सहयोगीसिद्ध हुन्छ । यसका साथै मुलाले चिसो बनाउने काम पनि गर्दछ, जसबाट जलनमा पनि राहत प्राप्त हुन्छ ।
पाइल्स रोगीका लागि काँचो मुला सेवन गर्नु अति लाभदायिक हुन्छ । तपाई चाहनु हुन्छ भने यसलाई पिँधेर पनि सेवन गर्न सक्नु हुन्छ । अझ तपाई मुलाको रस निकालेर पनि पिउन सक्नु हुन्छ । मुलाको रस सेवन गर्दा भने एकपटक चिकित्सकको सल्लाह आवश्य लिनुस् । तपाई मुलाको प्रयोग संक्रमित स्थानमा जलन शान्त पार्न लगाउन पनि सक्नु हुन्छ । अहिले त बजारमा मुलाको पाउडर पनि सहजै पाइन्छ । अझ तपाई मुलाको रस निकालेर पनि पिउन सक्नु हुन्छ । मुलाको रस सेवन गर्दा भने एकपटक चिकित्सकको सल्लाह आवश्य लिनुस् ।तपाई मुलाको प्रयोग संक्रमित स्थानमा जलन शान्त पार्न लगाउन पनि सक्नु हुन्छ ।
‘मलाई सहयोग गर्नुस्’ भन्न वालुवाटार बोलाएको जसपाले उल्टै यस्तो पद मागेपछि प्रधानमन्त्री चकित्
October 10, 2020 Khabar Pati
चिसो मौसममा हुने जोर्नी र घुँडा दुखाइबाट राहत पाउने १५ उपाय